I-StreamMaster PRIME inikeza ukushintshwa okulula kwehluzo, i-thematic playout yesiteshi namadivayisi wokulawula kahle | I-NAB Khombisa Izindaba | I-2020 NAB Show Media Partner noMkhiqizi weNAB Show LIVE. Izindaba Zokusakaza Zokusakaza
Ikhaya » Okufakiwe » I-StreamMaster PRIME inikeza ukushintshwa okulula kwehluzo, i-thematic playout yesiteshi namadivayisi wokulawula okuyinhloko
Xhuma i-plug esikhundleni se-switcher, ihluzo kanye neseva kungqalasizinda yefa
Amandla wePixel, umholi womhlaba wonke ku-playout, i-automation kanye nehluzo, ungeze i-StreamMaster PRIME kububanzi bayo bemikhiqizo yehluzo nemidlalo yokudlala. Isebenzisa ipulatifomu yayo yobuchwepheshe be-StreamMaster Media Processing, i-StreamMaster PRIME iyinsiza esebenza nge-turnkey enesethi yomsebenzi eguquguqukayo, eyenzelwe ngokuyinhloko njengokushintshwa kwamadivayisi ngamanye ekwakhiweni kwendabuko.
"Abasakazi abaningi esikhuluma nabo basitshele ukuthi abakabi sesimweni sokuthuthela esakhiweni esisha, esichazwe yi-software, kepha izinto ezizodingeka endaweni yazo," kuchaza uJames Gilbert, oyi-CEO ye Amandla wePixel. “I-StreamMaster PRIME ibanikeza into eyodwa, engabizi imali, yokuxhuma ngaphezulu kwe-SDI, ngazo zonke izixhumi ezivamile zokuxhumana, ngakho-ke kuyindlela elula yokungena esikhundleni se-switch control master ephelelwe yisikhathi, iseva yevidiyo noma i-graphics inserter.
"Okubaluleke kakhulu, amalayisense esoftware we-StreamMaster PRIME ayadluliselwa, ngakho-ke lapho umsakazi eqala ukuthuthela esakhiweni esisha noma imodeli yokuhambisa, ukusebenza okukhona kungadluliselwa ngaphandle kwezindleko ezengeziwe," engeza.
I-StreamMaster PRIME ingumsebenzi ozinikele, okwazi ukuxhasa imidwebo yokubeka uphawu ezenzakalelayo, ama-logo we-multi-layer static nama-animated, amawashi, ukukhasa kombhalo, ama-tickers, ukuhamba kwe-DVE nokuningi. Izinketho zifaka phakathi iseva yevidiyo yamachweba amabili, ukucutshungulwa komsindo wemisindo yeziteshi eziningi nokusebenza kokulawula okuyinhloko.
Iyakwazi ukusebenza ngokuzimela, ne-hardware noma amaphaneli wokulawula we-UI ayatholakala. Kuyinto plug-and-play nazo zonke izinhlelo ezishintshayo ezinkulu.
"Lokhu kuyimpendulo ngqo esidingweni sangempela esivela embonini," kusho uGilbert. “Ungumshini ojwayelekile onamandla wehadiwe okwanele ukuqhuba izinhlelo zokusebenza zesoftware okungenzeka ukuthi ziyadingeka, zenzelwe izidingo zomsebenzisi. Kulabo abadinga ukugcina uchungechunge lokusakaza oluyifa, noma mhlawumbe iloli lokusakaza langaphandle elidinga ukudlalwa kwehluzo, kuyisixazululo esamukelekile kakhulu. ”
I-StreamMaster PRIME iyatholakala manje.
Mayelana Amandla wePixel, a URohde noSchwarz Company
Amandla wePixel ithuthukisa isoftware echazwe, ebonakalayo, izixazululo ze-playout yokusakaza, i-automation, i-master control, ihluzo nokufaka uphawu lomkhiqizo okusetshenziswe kuziteshi zomugqa zethelevishini, i-OTT neVOD. Amasistimu wethu wokuklonyeliswa kanye namaphromoshini awine imiklomelo, amaswishi wokulawula amandla we-graph-graphic kanye nezinhlelo eziyinkimbinkimbi zokukhiqiza imidwebo evumela abakhiqizi ukuthi bahambise okuqukethwe okunamandla okubukhoma nokurekhodwe ngaphambili kwanoma iyiphi i-SD, HD, I-4k, iselula, i-intanethi noma i-interactive application.
Amandla wePixel inesipiliyoni seminyaka engama-33 sobungcweti bezobunjiniyela nokuzinikela ekusekelweni kwamakhasimende okwenze kwaba ukukhetha kuqala embonini ekudlaleni, kwimidwebo nakushicilelo. Ngokufakwa okuyizinkulungwane eziningana emhlabeni wonke, amakhasimende afaka abasakazi abahola phambili emakethe njenge-BBC, Samsung, ITV, SWR, WDR, i-TV2 eNorway, i-Danmarks Radio, i-TV5 Monde, i-CBC, i-Disney, i-Discover, i-ESPN, i-ViaSat ne-Sky.
Okutholwe kamuva ngu URohde noSchwarz GmbH, Amandla wePixel Indlunkulu yezinkampani iCambridge UK enezifunda zesifunda eGrass Valley California naseDaily UAE.
I-Tel: + 44 7775 581 301
Email: k[i-imeyili ivikelwe]
I-Tel: + 44 7899 977 222
4K Izimpawu ze-Animated Ukucutshungulwa komsindo ezishintshayo ukusebenza okuzimele Ukushicilelwa kwesiteshi Clocks DVE Graphics HD control control Isishintshi Sesilawuli Se-Mater ukudlala ihluzo ezinyakazayo iziteshi eziningi Ama-Logos ama-Multi-Layer Static Ott Amandla wePixel ukudlala Ama-Plug-ins URohde noSchwarz SDI Ukudlala okuchazwe ngesoftware Ukusakaza kweMidiya ye-StreamMaster I-StreamMaster PRIME Ama-Crawls wombhalo amathikha i-Turnkey Iseva yevidiyo I-vod 2020-09-15
Ngaphambilini: I-LWKS iqinisekisa ikusasa elizimele le-Lightworks NLE ne-QScan AQC
Olandelayo: ICartier Queen's Cup 2020 Polo Tournament ngumkhiqizo wokuqala wezemidlalo wamakhamera amaningi usebenzisa i-LiveU's LU800